Featured – SOCIAL KHIT NEWS
Featured, LIFE STYLE October 1, 2021
အဆီဖုတွေ ထပ်မပေါက်တော့အောင် လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းများ
Unicode အဆီဖုတွေ ထပ်မပေါက်တော့အောင် ဒါလေးတွေလည်းလုပ် Skin care လည်း ခနခနမပြောင်းနဲ့( တည့်နေရင်မပြောင်းနဲ့တော့) ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ ? ဒီအချက်သေးသေးလေးတွေကို လိုက်နာကြည့်ပါ ၁. ရေများများသောက်ပါ. ၂. ဝမ်းမချုပ်စေပါနဲ့ ၃. အဆင်ပြေနေတဲ့ Skincare ကို ခဏခဏ မပြောင်းချင်ပါနဲ့ ၄. တစ်ပတ်တစ်ခါ ခေါင်းအုံးစွပ်လေး လဲပေးပါ ၅. ဖုန်း screen ကို အရက်ပြန်လေးနဲ့ တစ်နေ့တစ်ခါ သန့်ရှင်းပေးပါ…
Featured, NEWS September 29, 2021
အင်္ဂလန်မှာ လောင်စာဆီပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပွားနေ ( စက်သုံးဆီဈေးတွေ ထပ်တက်အုံးမှာလား)
Unicode အင်္ဂလန်မှာ လောင်စာဆီပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပွားနေ ( စက်သုံးဆီဈေးတွေ ထပ်တက်အုံးမှာလား) အင်္ဂလန်မှာ လောင်စာဆီပြတ်ပြီး ပြသနာတက်နေလို့ စစ်တပ်နဲ့ လိုက်စောင့်ရှောက်နေရတယ် ဒီကနေ့ ဘလွန်းဘာဂ် ဝက်ဆိုက် က တက်လာတဲ့ သတင်းထဲမှာ အင်္ဂလန်မှာ လောင်စာဆီတွေ ပြတ်လပ်ပြီး ဆိုင်တွေ မှာ ရောင်းစရာမရှိတော့ ဂတ်စ်ဆိုင်တွေမှာ အ လုအယက် တန်းစီပြီး ဝယ်နေရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ယူကေ စီးပွားရေး အ တွင်းဝန် ကာဝါစီက တော့…
Featured, KNOWLEDGE September 20, 2021
နောင်ပွင့်တော်မူမည့် ဘုရားရှင်နှင့် မတွေ့နိုင်သောသူ၊ မဖူးထိုက်သူ လူ ( ၇ ) မျိုး အ ကြောင်း
Unicode နောင် ပွင့် တော် မူ မည့် ဘု ရား ရှင် နှင့် မ တွေ့နိုင် သူ၊ မ ဖူး ထိုက် သူ လူ ( ၇ ) မျိုး အ ကြောင်း နောင် ပွင့် တော် မူ မည့် ဘု ရား ရှင် နှင့် မ တွေ့နိုင်…
Featured, KNOWLEDGE August 13, 2021
2021 ခုနှစ်အတွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်
Unicode 2021 ခုနှစ်အတွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း… ဗုဒ္ဓ ဟူး / ရာ ဟု သား သ မီး များ သည် ဤနှစ် တွင် ကံ ကြမ္မာ က ဆိုး မ လို လို နှင့်အ ကောင်း ဘက် ကို အ လေး သာ တာ ကိုတွေ့…
Featured, LIFE STYLE August 8, 2021
ဒီရာသီဖွား (၅)ခုကတော့ လိုချင်ပြီဟေ့ ဆိုရင် တားမရတော့ဘူ
Unicode ဒီရာသီဖွား (၅)ခုကတော့ လိုချင်ပြီဟေ့ ဆိုရင် တားမရတော့ဘူး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်တယ်လို့ အပြောခံလိုက်ရရင် ဘယ်သူမဆို စိတ်တိုသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကြည့်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ နည်းတာနဲ့ များတာပဲ ကွာသွားတတ်တာပါ။ ခုပြောပြမယ့် ရာသီဖွား (၅) ဦးကတော့ အခြား ရာသီဖွား တွေထက် ပိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီရာသီဖွား (၅) ဦးကတော့ Aries – မိဿရာသီဖွား (မတ်လ…
ဦးနှောက်လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေမြင့်မားစေတဲ့ မှား ယွင်းတဲ့လူနေမှုပုံစံများ
ဘုရားကျောင်းမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘုန်းဘုန်းနဲ့အတူ ဘုရားရှိခိုးလေ့ရှိတဲ့ ခွေးလိမ္မာလေ
နေအိမ်ဒီဇိုင်းပုံစံကို မော်ဒယ်နှစ်ဦးငှားရမ်းကာ ကျောပေါ်တွင် ရေးဆွဲပြီး ဝယ်ယူသူတွေ စိတ်ဝင်စားစေရန်အတွက် ကြော်ငြာခဲ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ
သေဆုံးသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ကြောင်လေးကို သတိရတဲ့စိတ်နဲ့ ကြီးမားတဲ့ချုံပုတ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကြောင်ပုံစံဖန််တီးခဲ့တဲ့ အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် အနုပညာရှင်
ကလေးငယ်လေးတွေသေတဲ့အခါကျရင် အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အထဲမှာ သစ်ပင်ကို အ ခေါင်းပေါက်ပြုလုပ်ပြီး မြှုပ်နှံကြတဲ့ရွာ